Ny fampiharana Beta Notes dia tonga amin'ny iCloud.com | Avy amin'ny mac aho
Apple manampy Beta Notes amin'ny iCloud.com ho an'ny OS X 10.11 sy iOS 9 Beta Testers
Taorian'ny fanambarana tao amin'ny WWDC 2015 tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fa havaozina ny fampiharana Notes dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kinova beta an'ny Notes amin'ny iCloud.com i Apple. Ity kinova ity dia natao manokana ho an'ireo mpamorona sy mpanandramana beta an'ny iOS 9 sy OSX 10.11 El Capitan, ny kinova beta an'ny Notes dia manohana ireo fiasa rehetra naseho tamin'ny fampisehoana ny kaonferansa ary izany nizara ny sain'izy ireo izy ireo miaraka amin'ny multitasking an'ny iPad na serivisy fandefasana mozika Apple vaovao ankoatry ny hafa.
Araka ny efa nolazaiko, ireo mpampiasa irery ihany no mihazakazaka ny kinova beta an'ny iOS 9 na OS X El Capitan hahita ity kinova vaovao an'ny Notes ity araky ny voalaza ao amin'ny marika "beta" eo amin'ny zoro ankavia ambony dia mbola afaka mahita lesoka isika na fiasa tsy miasa, ny rindranasa hafa rehetra dia mitovy tanteraka amin'ireo amin'ny kinova miorina.
Ara-tantara, fa tsy ny fitantanana ny rindrambaiko beta ho an'ny kinova beta an'ny iOS sy OS X, Apple dia namoaka ny web apps fotsiny amin'ny alàlan'ny tranokala beta.iCloud.com. Amin'ity fomba vaovao ity dia afaka mamantatra tsara kokoa ireo mpampiasa mampiasa ny rafitra fiasa vaovao i Apple ary noho izany dia tery kokoa ireo bibikely sy hevitra avy amin'ireo mpampiasa ireo.
Araka ny lozisialy izay azontsika vakiana amin'ny dikanteny naoty ankehitriny:
Misy kinova roa an'ny fampiharana Notes azo alaina ao amin'ny iCloud.com. Ilay iray hitanao dia voafaritra ho azy rehefa miditra amin'ny iCloud.com ianao. Raha manavao ny kaontinao iCloud Notes amin'ny fitaovana iOS miaraka amin'ny iOS 9 beta ianao na amin'ny Mac misy OS X v10.11 beta dia ho hitanao ny fampiharana beta beta nohavaozina ao amin'ny iCloud.com. Raha tsy izany dia ho hitanao ao amin'ny iCloud.com ilay fampiharana Notes voalohany. Ny kinova ampiasaina dia aseho ao amin'ny bara fanamarihana Notes.
Ny rindranasa Notes vaovao dia hahafahan'ny mpampiasa manampatra naoty voasoratra miaraka amina sary namboarina, sary nafarana ary rohy eo ambanin'ny fanitarana fizarana. Ny safidy hanampiana sary dia hampidirina ho azy ao amin'ny jery lisitra lehibe amin'ny alàlan'ny default, mampiseho tranokala thumbnail ary mamela ny mpampiasa hahita haingana ny sary tadiavin'izy ireo. Ho fanampin'izay, tratrany miaraka amin'ny fampiharana malaza indrindra toy ny Evernote.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iCloud » Apple manampy Beta Notes amin'ny iCloud.com ho an'ny OS X 10.11 sy iOS 9 Beta Testers
Ok, isika izay niverina, ahoana no hanafoanana azy? 🙂
Taorian'ny fanavaozana ny fanamarihana ao amin'ny iOS9 na El Capitan…. raha te hampifandrindra ny fanamarihako amin'ny windows amin'ny alàlan'ny icloud.com… hifanaraka ve izany? Sa tsy ho mifanaraka amin'ny sary, sary, lisitra sns ny kinova tranonkala icloud.com?
mDNSresponder dia mijanona amin'ny OS X El Capitan
Tonga ny fanambarana Apple Music voalohany